Wararka - Waa maxay sababta ay tahay in loo isticmaalo palette caag ah, oo aan alwaax u isticmaalin ASRS?
MAXAY U ISTICMAALAYSAA SALDHIGGA BALAASIGA AH, UMA ISTICMAALAYSO LUQADDA KAYDINTA ISKUMA AMA NIDAAMKA SOO SAARINTA?
Iyada oo horumarka xawaaraha sare leh ee saadka iyo nidaamka maamulka bakhaarrada, gaar ahaan ganacsiga ee warshadaha cuntada iyo farmashiyaha, Automated Kaydinta iyo Nidaamyada Soo Celinta (ASRS) ayaa mar horeba u noqday doorasho wanaagsan shirkado badan oo u baahan nidaam wax ku ool ah oo gacan sare leh oo leh xawaare degdeg ah iyo darawalka forklift ayaa maamuli kara.
Nidaamka ASRS waxa uu ogolaadaa in badeecooyin badan lagu kaydiyo si toos ah, taas oo ka dhigaysa bakhaarka mid aad waxtar u leh iyo badbaadinta qiimaha dhismaha bakhaarka.Sababtoo ah waa si toos ah, waxay shaqayn kartaa wakhti kasta iyada oo aan daal lahayn oo ay raacdo barnaamijka xakamaynta.Sidoo kale sababtaas awgeed, waxaa jira dhibaato ASRS-ta ah, taas oo ah nidaamku ma aqoonsan karo guul-darrooyinka ka baxsan barnaamijkiisa mana garanayo sida loola macaamilo dhibaatada xitaa haddii uu aqoonsado inuu jiro.Taasi waxay keeni doontaa in nidaamka joogsado ama dhaawacmo.Oo sug farsamayaqaannada aadanaha.Bakhaar si toos ah otomaatiga u ah oo waqtigu lacag ka dhigan yahay, tani waxay keeni kartaa daahitaan dheer, shixnadaha seegay, iyo kharash aad u badan oo shirkadda ah.
Ka dib asalka ASRS, waxaa jira khataro ah in la isticmaalo palette alwaax ah ASRS.
1. Sariiraha alwaaxdu waxay isku hayaan ciddiyaha, waxaa jira khataro haddii ciddiyadu ay fashilmaan wakhti kasta.Haddii ay tani dhacdo marka palette-ku uu ku shaqaynayo ASRS, taas oo keeni karta in alaabtu ay la dhacdo alwaax dabacsan iyo cidiyaha kuwaas oo qabsan kara jidadka iyo qalabka.
2. Qaybo ka mid ah saqafka alwaax ka samaysan ee dabacsan ama jabay waxay keeni doonaan culays aan sinnayn.Culeyska aan dheeli tirnayn wuxuu dhaawici karaa fargeetooyinka iyo daadinta alaabta ama waxyeello.
3. Saqafka alwaaxdu waa nuugaya, oo qaata qoyaan iyo bakteeriya iyo fangaska ku dhex jira hadhuudhka alwaax.Waxay kaloo nuugi karaan kiimikooyinka sidoo kale, laga yaabo inay wasakheeyaan alaabta.Markaa shirkaduhu waa inay bixiyaan kharashka wasakhaynta.
Pallets balaastikada ah ayaa ah doorashada ku habboon ASRS.
1.Plastic pallets waa qaybo isku dhafan oo caag ah, Qaabdhismeedkeedu wuxuu go'aamiyaa in xoogagga culeyska si siman loo qaybiyo dhammaan palette-yada.
2.Balaastig tayo sare leh ma dillaaci doonaan, ma dillaaci doonaan, mana beddeli doonaan cabbirka ama qaabka.Taas macnaheedu waa in aan loo baahnayn in lagu ilaaliyo palette sida alwaax taas oo badbaadin doonta kharashka shaqada.
3.Miisaankooda lebbiska ah iyo sagxada taageerta culayska guud ahaan taako ka mid ah sagxadda sagxadda oo dhan iyo nashqaddeeda ka-hortagga sibidhka waxay yaraynaysaa fursadaha beddelka badeecada ama simbiriirrada inta lagu jiro gaadiidka.
4. Balaastigga khafiifka ah ee xajiya culayska ayaa hoos u dhigaya jeexjeexa iyo jeexjeexa qalabka kaas oo badbaadin doona kharashka iyo waqtiga.
5. Balaastiggu waa mid aan nuugo oo nadiif ah.Way fududahay in la nadiifiyo iyada oo aan saameyn ku yeelan isticmaalka nolosha, cabbirka, iyo awoodda rarka.
Markaa sidee baa ASRS loogu doortaa balaastigga balaastigga ah?
1. Cabbirka: Cabbirka suufka wuxuu u baahan yahay si waafaqsan naqshadaynta nidaamkaaga iyo shuruudaha qalabka.
2. Awoodda culeyska.Awoodda rarka rack waa qodobka ugu muhiimsan marka aad dooranayso palette.
3. Qalab.PP iyo PE ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee sariiraha.Waxaa jira walxo dib loo warshadeeyay iyo walxo bikro ah.Maaddadu waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka palette-yada isticmaalka nolosha.
4. heerkulka bakhaarka.Kaydinta qabowga iyo heerkulka sare ayaa sidoo kale saameyn doona waxqabadka palette-yada.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahan tahay sariiraha mashruucaaga, ku soo dhawoow inaad nala soo xiriirto.Waxaan bixin doonaa xal iyadoo loo eegayo duruufaha gaarka ah.
Waqtiga boostada: Agoosto-04-2021